MKVToolNix, seti yemidziyo yekugadzirisa uye kushandisa MKV | Linux Vakapindwa muropa
MKVToolNix, seti yemidziyo yekugadzirisa nekushandisa MKV
MKVToolNix muunganidzwa wezvishandiso zveMatroska multimedia mudziyo fomati (MKV) yakagadzirwa naMoritz Bunkus. Inoitira Matroska zvinoitwa neOGMtools zvemhando yeOGM.
Matroska mafaira uye maturusi emahara uye akavhurwa sosi, uye zvinoenderana nemapuratifomu akasiyana siyana, akadai seLinux, kupihwa kweBSD, macOS, uye Windows.
Nemidziyo iyi unogona kuwana ruzivo nezve Matroska mafaera (mkvinfo), unogona kutora matraki uye data kubva kuMatroska mafaera (mkvextract) uye gadzira Matroska mafaera (mkvmerge) kubva kune mamwe mafaera e multimedia.
Matroska itsva multimedia faira fomati ine chinangwa chekuve nyowani mudziyo fomati yeramangwana.
Iwo maturusi anogona zvakare kutorwa pasi kubva kune vhidhiyo software vatengesi uye FOSS repositori.
MKVToolNix inogona kushandiswa kugadzira, kupatsanura, kugadzirisa, mux, demux, kubatanidza, kubvisa, kana kuongorora Matroska mafaera.
Purogiramu Iyo zvakare ine rutsigiro rwekugona kuita zviito nemamwe akakurumbira mavhidhiyo mafomati senge: AVI, MPEG, MP4, MPEG, Ogg / OGM, RealVideo, MPEG1 / 2, h264 / AVC, Dirac, VC1) inosanganisira mamwe mavhidhiyo codecs (senge VP9 vhidhiyo codec rutsigiro - kuverenga kubva kuFIV / Matroska / WebM mafaera, kuburitsa kuIVF mafaera).
Zvakare nemafomati ekuteerera (AAC, FLAC, MP2, MP3, (E) AC3, DTS / DTS-HD, Vorbis, RealAudio) uyezve mazhinji mafomu emusoro (SRT, PGS / SUP, VobSub, ASS, SSA, nezvimwewo).
1 Nezve iyo nyowani vhezheni yeMKVToolNix 30.1.0 «Nokusingaperi Uye Zvimwe»
2 Maitiro ekuisa MKVToolNix paLinux?
2.1 Kuisirwa uchishandisa AppImage
2.2 Kuisirwa pane Arch Linux uye zvigadzirwa
2.3 Kuiswa paDebian
2.4 Kuisirwa kubva kuFlatpak
Nezve iyo nyowani vhezheni yeMKVToolNix 30.1.0 «Nokusingaperi Uye Zvimwe»
Munguva pfupi yapfuura Iyi seti yemidziyo yakagamuchira vhezheni itsva muvhiki rino rekutanga ra2019 uye mazuva mashoma mushure mekuburitswa kweshanduro, vhezheni yeshanduro yakaburitswa yakagadzirisa mamwe matambudziko akawanikwa.
Of which vakagadzirisa hurongwa hwekusanganisa, sezvo hwakanga husina kugadziriswa muUFT-8 uye kuti mune iyo GUI bug ine iyo multiplexer yakagadziriswa umo mhinduro yekukweva nekudonhedza bug inopihwa.
Nezve iyo vhezheni ye macOS ine bug ine Qt 5.12 yakagadziriswa.
Imwe bhagi mune iyo GUI iyo yakagadziriswa yaive neiyo chitsauko mupepeti, painovhura Matroska / WebM faira isina zvitsauko uye wozovachengeta zvakare, mupepeti anga achitora iyo faira kune akati wandei saizi saizi.
Una yezvinhu zvitsva zvakawedzerwa zvaive mukutora kweWAV sezvo izvi zvino zvichanyora W64 mafaera panzvimbo peWAV kana iro zita rezita rekuwedzera riri `.w64` kana kana iyo yekupedzisira faira saizi yakakura kupfuura 4GB, iyo saizi refaira muganho wemafaira eWAV.
Kune rimwe divi, iyo faira inodzora, kana iwe ukabaya padziri, menyu ine gumi gumi achangoshandiswa madhairekitori anoratidzwa. Kusarudza imwe yacho kuchachinja faira rekuenda.
Maitiro ekuisa MKVToolNix paLinux?
Kana iwe uchifarira kugona kuisa iyi suite yezvishandiso pane yako system, unogona kuzviita nekutevera rairo dzatinogovana, zvinoenderana nekuparadzirwa kweLinux kwauri kushandisa.
Kuisirwa uchishandisa AppImage
Imwe yesarudzo dzatinofanira kuwana MKVToolNix, iri kurodha pasi iyo AppImage yeiyi, saka kurodha pasi yazvino vhezheni yakagadzikana.
Kugona kurodha pasi kubva kune iyo terminal, unogona kuzviita nerubatsiro rwemutemo unotevera:
Kamwe chete paki inoenderana yatotorwa pasi, unofanirwa kuipa mvumo yekuita nemirairo inotevera:
Uye ivo vanogona kuvhura iko kunyorera nekudzvanya kaviri paAppImage faira kana kubva kune iyo terminal nekutaipa:
Kana vari Vashandisi veArch Linux uye chero kugoverwa kunobva mairiIvo vanozokwanisa kuwana iko kunyorera kubva kune yepamutemo Arch Linux repositories. Ivo vanongofanirwa kunyora iwo unotevera kuraira mune terminal:
Kune avo vari vashandisi veDebian 9 kana kugoverwa kunoenderana neshanduro iyi, tiri kuzovhura terminal uye mairi mhando:
Mukati meizvi isu tichaisa zvinotevera:
Isu tinochengeta gwaro neCtrl + O uye kuvhara nano neCtrl + X.
Ipapo tinonyora mune inouraya:
Isu tinogadziridza zvinyorwa zvedu ne:
Para mamwe ese ekuparadzirwa kweLinux anogona kuwanikwa nerubatsiro rwePappak paketi. Isu tinongofanirwa kuve nerutsigiro pazviri. Mune terminal tinenge tichinyora:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » MKVToolNix, seti yemidziyo yekugadzirisa nekushandisa MKV